အကောင်းဆုံး Vinpocetine အမှုန့် (42971-09-5) ထုတ်လုပ်သူ
Cofttek သည်တရုတ်နိုင်ငံတွင်အကောင်းဆုံး Vinpocetine အမှုန့်ထုတ်လုပ်သူဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏စက်ရုံတွင်လစဉ်ထုတ်လုပ်မှုပမာဏ ၃၄၀ ကီလိုဂရမ်နှင့်ပြည့်စုံသောထုတ်လုပ်မှုစီမံခန့်ခွဲမှုစနစ် (ISO9001 & ISO14001) ရှိသည်။
Vinpocetine အမှုန့် Specifications
မော်လီကျူးအလေးချိန်: 350.454 g / mol
ပွိုင့်အရည်ပျော်: 147-149 ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်
ဓာတုအမည်: AY-27255, Cavinton, Eburnamenine-14-carboxylic acid, Ethyl Apovincaminate, Ethylapovincaminoate၊
နာမ်: Ethyl Ester, RGH-4405, TCV-3b, Vinpocetin, Vinpocetina, Vinpocétine
InChI Key ကို: DDNCQMVWWZOMLN-IRLDBZIGSA-N
ဘဝတစ်ဝက်ဖျက်သိမ်းခြင်း: 2.54 +/- 0.48 နာရီ
လျှောက်လွှာ: Vinpocetine သည် Periwinkle စက်ရုံမှဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သိမှုကာကွယ်မှုနှင့်အိုမင်းခြင်းကိုကာကွယ်ပေးနိုင်သောပစ္စည်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ Vinotocetine သည် nootropics ၏အတွေ့ရများသည့်အရာများတွင်သွေးစီးဆင်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးနိုင်ပြီးမှတ်ဥာဏ်ကိုတိုးမြှင့်နိုင်သည်။ ဒီအဆုံးစွန်သောပြောဆိုချက်ကိုစုံစမ်းစစ်ဆေးနိုင်ခြင်းမရှိသေးပေ။
Vinpocetine (၄၂၉၇၁-၀၉-၅) NMR Spectrum
Vinpocetine (42971-09-5) ကဘာလဲ?
Vinpocetine သည် Perwinkle စက်ရုံမှဆင်းသက်လာသော Alalaloid ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုဖြစ်သည် (အထူးသဖြင့် 'vincamine' ဟုခေါ်သောမော်လီကျူးမှဖန်တီးထားခြင်း) သည်ဥရောပနိုင်ငံများ၌သိမြင်မှုကျဆင်းခြင်း၊ လေဖြတ်ခြင်းနှင့်ဝက်ရူးပြန်ရောဂါရောဂါများကိုကုသရာတွင်အတွေ့အကြုံများစွာရှိသည်။ Vinpocetine သည်မှတ်ဥာဏ်တိုးပွားစေရန်အတွက် nootropic ဒြပ်ပေါင်းတစ်ခုအနေဖြင့်လည်းအသုံးပြုလေ့ရှိသည်။
Vinpocetine အမှုန့် (42971-09-5) အကျိုးကျေးဇူးများ
Vinpocetine ကိုအပြည့်အဝစုပ်ယူနိုင်ခြင်းမရှိသော်လည်း၊ သွေးထဲရှိအမြင့်ဆုံးစုပ်ယူနိုင်သောအရာများသည် ဦး နှောက်ထဲသို့ ၄ င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာများကိုအလွယ်တကူဝင်ရောက်နိုင်သည်။ ခံတွင်း vinpocetine ဖြည့်စွက်ရန်လျှောက်ထားပုံရသောဂုဏ်သတ္တိများ (အဆိပ်များနှင့်အလွန်အကျွံဆွဆန့်ကျင်) neuroprotection နှင့်အာရုံကြောရောင်ရမ်းခြင်းကိုလျှော့ချပါဝင်သည်, ထိုသိမြင်မှုတိုးမြှင့်အကျိုးသက်ရောက်မှုကိုကောင်းစွာအချိန်ဤအချက်မှာသက်သေအထောက်အထားများကထောက်ခံခံရဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ vinpocetine သည်အဆိပ်အတောက်သို့မဟုတ်ဖိအားများကိုမေ့ဆေးကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းမှကာကွယ်ရာတွင်ထိရောက်သည်ဟုထင်ရသော်လည်း၎င်းသည်ပင်ကိုအားဖြင့်မှတ်ဥာဏ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုတိုးတက်စေသည်ဟုမပြသပါ။
Vinpocetine သည်လည်းသိမြင်မှုကျဆင်းခြင်းကိုတားဆီးနိုင်စွမ်းရှိသည်ဟုထင်ရသော်လည်းဤအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သက်၍ စာပေပမာဏသည်ဤရည်ရွယ်ချက်အတွက်စမ်းသပ်ထားသောအခြားဆေးဝါးများ (အထူးသဖြင့် CDP-Choline သို့မဟုတ် Alpha-GPC) ထက်များစွာနည်းသည်။ အနည်းဆုံးလေ့လာမှုတစ်ခုက ၄၀ မီလီဂရမ်ဆေးပြား vinpocetine နှင့်တုံ့ပြန်မှုအချိန်တိုးတက်မှုရှိကြောင်းသတိပြုမိသည်။ ၎င်းသည်ယခုအချိန်တွင်ကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်တစ်ခုတည်းသောလက်တွေ့ကျသောတိုးတက်မှုများထဲမှတစ်ခုဖြစ်သည်။
vinpocetine ၏ထိုးသွင်းမှုများသည်မူလအားဖြင့်စနစ်တကျဖိအားကိုမပြုပြင်ဘဲ ဦး နှောက်သို့သွေးစီးဆင်းမှုကိုမြှင့်တင်ပေးသည်။ ဤသည်ကိုပါးစပ်ဖြင့်စားခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည်ဟုထင်မြင်ရသည်။ ၎င်းသည်ဖိအားအလွန်အကျွံကြောင့်ဖြစ်ပေါ်သောခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလျော့နည်းစေပြီးအဝိုင်းအပင် (ခေါင်းကိုက်ခြင်းကိုလျှော့ချရန်) ၏အစဉ်အလာအသုံးပြုမှုနှင့်အညီဖြစ်သည်။
Vinpocetine (၄၂၉၇၁-၀၉-၅) လြှောကျလှာ?
vinpocetine ၏ယန္တရားများမြောက်မြားစွာရှိပါသည်။ ၎င်းသည်အိုင်းယွန်းလိုင်းများ (ဆိုဒီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်နှင့်ကယ်လစီယမ်) တို့နှင့်အပြန်အလှန်ဆက်သွယ်မှုရှိပုံရပြီး၊ dopamine သို့မဟုတ် glutamate ဖိနှိပ်သည့်အခါ neurotransmitter ထုတ်လွှတ်မှုနှင့် neuroprotection အပေါ်ဖိနှိပ်သောအကျိုးသက်ရောက်မှုများဖြစ်ပေါ်စေလေ့ရှိသည်။ ၎င်းသည် alpha adrenergic receptors နှင့် TPSO receptor များနှင့်လည်းအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်သည်။ ဤ receptor interaction က၏အကျိုးကျေးဇူးအတိအကျကိုမသိရသော်လည်း၎င်းတို့သည် ion channel interaction ပြုသည့်ပြင်းအားများ၌ဖြစ်ပေါ်သောကြောင့်၎င်းတို့နှင့်သက်ဆိုင်နိုင်သည်။
Vinpocetine သည် PDE1 inhibitor ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် cardioprotective နှင့်သိမြင်မှုတိုးမြှင့်သောယန္တရားတစ်ခုဖြစ်သည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ဤတားစီးမှုသည်အတော်အတန်ကြီးမားသောပမာဏဖြင့်ဖြစ်ပွားပြီး vinpocetine ၏ပုံမှန်ဖြည့်စွက်ဆေးများနှင့်မသက်ဆိုင်ပါ။
PDE1 နှင့်ဆင်တူသည် vinpocetine ၏ antidopaminergic အလားအလာနှင့် glutaminergic receptors ကိုတိုက်ရိုက်တားစီးခြင်းသည်နှစ် ဦး စလုံးသည်စသည်တို့၌အလွန်မြင့်မားသောပြင်းအားများ၌တွေ့ရှိရပြီးစံဖြည့်စွက်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်မှုမရှိပေ။
Vinpocetine (၄၂၉၇၁-၀၉-၅) ဆေးတခါသောက်
Vinpocetine ကိုနေ့စဉ်သောက်သုံးသောပမာဏမှ ၁၅-၆၀ မီလီဂရမ်ဖြင့်အစားအစာဖြင့်နေ့စဉ်သုံးကြိမ်ခွဲခြားသည်။ ဤအစားအစာသုံးခုစီတွင်စံချိန်နိမ့်ကျသောဆေးပမာဏသည် ၅ မီလီဂရမ်ဖြစ်သည်။ အစာတစ်မျိုးလျှင် ၂၀ မီလီဂရမ်ထိရောက်မှု၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဖြစ်သည်။ ဤဆေးများကိုအာရုံကြောကာကွယ်မှု၊ ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုတိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်သိမြင်မှုကျဆင်းမှုနှုန်းကိုလျှော့ချရန်ရည်ရွယ်သည်။
၎င်းအကွာအဝေး၏အမြင့်ဆုံး (၃၀-၄၅ မီလီဂရမ်စူးရှသောဆေးညွှန်း) ပမာဏသည်အခြားကျန်းမာသန်စွမ်းသူများအတွက်သိမှတ်မှုနှင့်မှတ်ဥာဏ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုမြှင့်တင်ရန်အတွက်အသုံးဝင်သည်။ သို့သော်ဤပြောဆိုချက်ကိုကြည့်သည့်သက်သေအထောက်အထားများစွာမရှိပါ။
သတိပေးချက် - ကိုယ် ၀ န်ဆောင်အမျိုးသမီးများအတွက် ၁၀ မီလီဂရမ် /dပမာဏနှုန်းနှင့်ညီမျှသောတိရစ္ဆာန်လေ့လာမှုများတွင်သန္ဓေသားအဆိပ်သင့်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ 10 mg /dသည်အထူးသဖြင့်ကိုယ် ၀ န်ဆောင်မှုတစ်ခုလုံးကိုသောက်သည့်အခါတွင်လည်းအန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။
Vinpocetine အမှုန့် ရောင်းမည်(Vinpocetine အမှုန့်အမြောက်အများကိုအဘယ်မှာဝယ်ယူရမည်နည်း)
ကျွန်ုပ်တို့သည်နှစ်ပေါင်းများစွာပရော်ဖက်ရှင်နယ် Vinpocetine အမှုန့်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းသူဖြစ်ပြီးကုန်ပစ္စည်းများကိုအပြိုင်အဆိုင်စျေးနှုန်းဖြင့်တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ထုတ်ကုန်သည်အရည်အသွေးအမြင့်ဆုံးဖြစ်ပြီးကမ္ဘာတစ် ၀ န်းစားသုံးမှုအတွက်လုံခြုံမှုရှိစေရန်သေချာစွာ၊ လွတ်လပ်သောစမ်းသပ်မှုများပြုလုပ်သည်။
Abdel-Salam OME ။ Vinpocetine နှင့် piracetam တို့သည်ကြွက်များတွင် visceral နာကျင်မှုပုံစံအတွက် antinociceptive အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ Pharmacol ကိုယ်စားလှယ် 2006; 58 (5): ။ 680-691.17085860
Akopov SE, Gabrielian ES ။ ကွဲပြားခြားနားသောပေါင်းစပ်အေးဂျင့်များကတစ် ဦး တည်းနှင့်ပေါင်းစပ်အတွက်သွေးဆောင် platelet စုစည်းခြင်းအပေါ်ပြုမူသော Aspirin ကို, dipyridamole, nifedipine နှင့် Cavinton ၏ဆိုးကျိုးများ။ Eur J ကို Clin Pharmacol ။ 1992; 42 (3): 257-259.1577042
Alkuraishy HM၊ Al-Gareeb AI၊ Albuhadilly AK ။ Vinpocetine နှင့် pyritinol - ကျပန်းထိန်းချုပ်ထားသောလက်တွေ့လေ့လာမှု - ဦး နှောက်သွေးကြောသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါများအတွက်သွေးကြောဆိုင်ရာပြောင်းလဲခြင်းအတွက်ပုံစံသစ်။ Biomed Res Int ။ 2014; 2014: 324307.25548768 ။